ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့်(စံချိန်တွေချိုးလိုက်လာတဲ့ ကိုဗစ်ကူးစက်မှု) - Poppin News
ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့်(စံချိန်တွေချိုးလိုက်လာတဲ့ ကိုဗစ်ကူးစက်မှု)
August 31, 2020 by Poppin News
ယနေ့ည ပိုးတွေ့လူနာ (၉၅)ဦးထပ်တိုးပြီး စံချိန်ထပ်ချိုး
(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၃၁) ရက်
• ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ (၃၀-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၇:၃၀) နာရီ အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သော သတင်းအချက်အလက်များအရ –
• တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေမှာ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာဦးရေ စုစုပေါင်း (၂၄,၈၅၄,၁၄၀) ဦးနှင့် သေဆုံးသူဦးရေ စုစုပေါင်း (၈၃၈,၉၂၄) ဦး ရှိပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားသေဆုံးမှုများ ဆက်လက်များပြားလျက် ရှိသောကြောင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် ပေါ့ဆမှု (လုံးဝ) မရှိဘဲ အောက်ပါအချက်များကို ဆက်လက် လိုက်နာကျင့်သုံးပါက COVID-19 ကူးစက်မှုမှကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(က) တတ်နိုင်သမျှ လူစုလူဝေးရှိရာ နေရာများသို့ မလိုအပ်ဘဲ (လုံးဝ) မသွားကြပါရန်။
(ခ) တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး တတ်နိုင်သမျှ ခပ်ခွာခွာ နေထိုင်ကြပါရန်။ ဖြစ်နိုင်ပါက အနည်းဆုံး (၆) ပေ အကွာမှသာ နေထိုင်ပြောဆိုဆက်ဆံကြပါရန်။
(ဂ) (လိုအပ်၍) အပြင်ထွက်ပါက၊ လူစုလူဝေးရှိသည့်နေရာများသို့သွားပါက သွားသည့်အခါတိုင်း ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (mask) ကို စနစ်တကျ မပျက်မကွက် တပ်ဆင်ကြပါရန်။
(ဃ) လက်တွင်ကပ်ပါလာနိုင်သော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ပျက်စီးစေရန်အတွက် လက်ကို ဆပ်ပြာနှင့်ရေ အသုံးပြု၍ အနည်းဆုံး စက္ကန့် (၂၀) ကြာအောင် ဆေးကြောကြပါရန်။
ပွညျသူမြား လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကွပါနှငျ့(စံခြိနျတှခြေိုးလိုကျလာတဲ့ ကိုဗဈကူးစကျမှု)
(၂၀၂၀) ပွညျ့နှဈ၊ ဩဂုတျလ (၃၁) ရကျ
• ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့၏ (၃၀-၈-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ မွနျမာစံတျောခြိနျ (၁၇:၃၀) နာရီ အခြိနျတှငျ ထုတျပွနျသော သတငျးအခကျြအလကျမြားအရ –
• တဈကမ်ဘာလုံးတှငျ COVID-19 ရောဂါဖွဈပှားမှုအခွအေနမှော ဓာတျခှဲအတညျပွုလူနာဦးရေ စုစုပေါငျး (၂၄,၈၅၄,၁၄၀) ဦးနှငျ့ သဆေုံးသူဦးရေ စုစုပေါငျး (၈၃၈,၉၂၄) ဦး ရှိပါသညျ။
ဤကဲ့သို့ ကမ်ဘာတဈဝနျးတှငျ COVID-19 ကူးစကျဖွဈပှားသဆေုံးမှုမြား ဆကျလကျမြားပွားလကျြ ရှိသောကွောငျ့ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ ပေါ့ဆမှု (လုံးဝ) မရှိဘဲ အောကျပါအခကျြမြားကို ဆကျလကျ လိုကျနာကငျြ့သုံးပါက COVID-19 ကူးစကျမှုမှကာကှယျနိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။
(က) တတျနိုငျသမြှ လူစုလူဝေးရှိရာ နရောမြားသို့ မလိုအပျဘဲ (လုံးဝ) မသှားကွပါရနျ။
(ခ) တဈဦးနှငျ့ တဈဦး တတျနိုငျသမြှ ခပျခှာခှာ နထေိုငျကွပါရနျ။ ဖွဈနိုငျပါက အနညျးဆုံး (၆) ပေ အကှာမှသာ နထေိုငျပွောဆိုဆကျဆံကွပါရနျ။
(ဂ) (လိုအပျ၍) အပွငျထှကျပါက၊ လူစုလူဝေးရှိသညျ့နရောမြားသို့သှားပါက သှားသညျ့အခါတိုငျး ပါးစပျနှငျ့ နှာခေါငျးစညျး (mask) ကို စနဈတကြ မပကျြမကှကျ တပျဆငျကွပါရနျ။
(ဃ) လကျတှငျကပျပါလာနိုငျသော ဗိုငျးရပျဈပိုးကို ပကျြစီးစရေနျအတှကျ လကျကို ဆပျပွာနှငျ့ရေ အသုံးပွု၍ အနညျးဆုံး စက်ကနျ့ (၂၀) ကွာအောငျ ဆေးကွောကွပါရနျ။
Categories ကျန်းမာရေး Post navigation
ဖခင်ဦးကျော်ဟိန်းအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သမီးဖြစ်သူ စိမ့်စိမ့်သူ(ရုပ်သံ)
သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ…။
POPPIN NEWS provide celebrity, life style,breaking news, local news and International news.Articles are displayed in tex,video and photos.Vistors can read news in articles type of categories in https://poppinnews.com/ (example - News, Entertainment,Sport, Health, Celebrity, Media &Music ...etc). Hope our vistors enjoy our website.
© 2020 Poppin News • Built with GeneratePress